कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनेको अमेरिका कहिले खुल्छ ? भ्याक्सिन नबनेसम्म खोल्न नहुने तर्क | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनेको अमेरिका कहिले खुल्छ ? भ्याक्सिन नबनेसम्म खोल्न नहुने तर्क
कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनेको अमेरिका कहिले खुल्छ ? भ्याक्सिन नबनेसम्म खोल्न नहुने तर्क
बैशाख २७ गते, २०७७ - १३:००
साना व्यवसाय सम्बन्धी तथ्याङ्क राख्दै आएको सरकारी निकायको तथ्याङ्कअनुसार चौबीसै घण्टा ७ दिन सेवा दिन व्यवसाय वन्द भएका छन् । अमेरिकामा साना व्यवसायको सङ्ख्या तीन करोड सात लाखको सङ्ख्यामा रहेको र त्यसमा पाँच करोड ९९ लाख जनशक्तिले कामगर्दै आएका छन् । यसले साना व्यवसाय झन् चौपटमा परेको देखिएको छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा क्यालिफोर्निया राज्यको मात्र १४ दशमलव ३ प्रतिशतको योगदान रहेको छ भने न्युयोर्कको ७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । यी दुई राज्यमा कोरोनाको सङ्क्रमणले पारेको असरले गर्दा पनि अर्थतन्त्र निकै गहिरो सङ्कटमा जानसक्ने स्पष्ट भएको छ । तथापि सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज २२ खर्ब डलरको कारणले अनलाइन व्यवसाय भने यस्तो महासङ्कटको वेला पनि फष्टाएको छ ।
अहिले अमेरिकाको संयन्त्र अमेरिकालाई सुरक्षित तरिकाले कसरी खुला गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । एकथरि विश्लेषकहरुले भने यसको भ्याक्सिन नबनेसम्म खोल्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्को अवधारणाअनुसार पर्याप्त परीक्षणको व्यवस्था गरेर अब खोल्न ढिलो गर्न हुदैन भन्ने छ । त्यसैले यहाँ अनेक तयारीहरु जारी नै रहेको भएपनि अहिले नै अमेरिका खुलेर पूर्ववत अवस्थामा फर्किन्छ भन्ने आँकलन गर्न भने कसैले पनि सकेका छैनन् ।
बैशाख २७ गते, २०७७ - १३:०० मा प्रकाशित